Dia mbola ho toy ny mahazatra indray ve ny zavatra hitranga eny anivon’ny anjerimanontolo amin’izao andro vitsy tsy hifaranan’ny taona izao ka rehefa hahazo amin’ny ampahany ny anjarany ireo mpampianatra mpikaroka dia hifanohivakana hitaky ny azy indray avy eo ireo mpianatra sy mpandraharaha. Isan’ny tena tsy levon’ny vavonin’ireto SECES Antananarivo ireto ny fiheveran’ny minisitra tomponandraikitra, Rasoazananiera Marie Monique, azy ireo ho toy ny zaza aman’ankizy, raha ny fanazavan’izy ireo farany, raha toa nanambitamby tamina vola 2 tapitrisa Ariary monja ity minisitra ity. Hitokona eo an-tokontanin’ny oniversite manomboka anio amin’ny 9 ora ny SECES ary nilaza ny tsy hijanona raha tsy mivaly ny fitakian’izy ireo dia ny saram-pikarohana taona 2015-2016, izay mbola tsy voaray hatramin’izao miaraka amin’ny an’ireo tokony handeha retirety saingy mbola manohy ny asany hatramin’ny faran’ny taona. Isany ihany koa ilay antsoina hoe : “Obligation de service” 125 ora. Hafampana indray izany eny Ambohitsaina eny.